Ihe edemede John Manganaro na Martech Zone |
Edemede site na John Manganaro
John Manganaro bụ VP nke Ngwaahịa & Nchịkọta maka Draịva, ebe ọ na-ahụ maka ihe ọhụrụ ngwaahịa na nchịkọta data, lekwasịrị anya n'inyere ndị na-ere ahịa aka ijikwa ngwa ahịa ụgbọ ala ha nke ọma. Na mbụ, Manganaro bụ onye ndụmọdụ njikwa maka PwC yana onye nwe ngwaahịa maka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, gụnyere Cars.com.
Ọgbọ ozi: Mil nweta Millennials na Data-Driven Approach
Dabere na nyocha nke Zillow mere n'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ puku afọ na-etinyekwu oge na-eme nnyocha, na-azụ ahịa maka nhọrọ kachasị mma na ịtụle ọnụahịa tupu ịzụta. Ma mgbe oge ọhụụ a nke ndị na-azụ ahịa nke ultra na-anọchite anya isi mgbanwe maka ụdị na ụlọ ọrụ, ọ na-enyekwa ohere ọla edo. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa agbanweela ngwakọta ahịa ha iji lekwasị anya na mmemme dijitalụ, ọ dịkwa oke mkpa iji otu uru nke data data taa